Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Yiyo le: IAlitalia ithatha uhambo lwayo lokugqibela
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Yiyo le: IAlitalia ithatha uhambo lwayo lokugqibela.
Ciao, bella! Iminyaka engama-75 yenkonzo ephethe iflegi yase-Itali iyaphela namhlanje.
I-Italiya eneminyaka engama-75 ubudala ephethe iflegi yelizwe, iAlitalia, yayiyinqwelomoya yesithathu ngobukhulu eYurophu ekupheleni kweminyaka yoo-1960, ngasemva kweBritish Airways kunye neAir France.
I-airline, eyadibanisa amashumi eminyaka idibene noqoqosho lwasemva kwemfazwe e-Itali, ilahlekelwe yimali ukusukela ngo-2008.
IAlitalia iyakuthatyathelwa indawo yinqwelomoya entsha, iITA, eqala ukusebenza ngolwesiHlanu.
Inqanawa yelizwe lase-Italiya, iAlitalia- Inqwelomoya yesithathu ngobukhulu eYurophu ekupheleni kweminyaka yoo-1960, ngasemva kweBritish Airlines kunye neAir France, eyathi yanxulunyaniswa noqoqosho lwasemva kwemfazwe amashumi eminyaka, ekugqibeleni yaphela kuhambo lweminyaka engama-75.
Alitalia, Kucwangciselwe ukwenza inqwelomoya yokugqibela, ngo-Okthobha 14, ngenkonzo esuka eCagliari isiya eRoma.
Emva komhla, i-Alitalia iyakuthatyathelwa indawo yinqwelomoya entsha, i-ITA, eqala ukusebenza ngolwesiHlanu.
Inqwelomoya yokugqibela e-Alitalia isuka eSardinia kulindeleke ukuba yehle kwisikhululo seenqwelomoya i-Rome-Fiumicino ngo-11: 10 ebusuku (21:10 GMT), utshilo isithethi seenqwelomoya.
Yakuba nje iyisiphatho somoya esinamandla kwihlabathi lonke, esasithwele abakhweli abazizigidi ezingama-25 minyaka yonke ngoo-1990s ukusuka kwiroma eyokuqala eyi-10,000 1947 ngo-XNUMX, Alitalia yayiyinqwelomoya yokuqala emhlabeni ukuba ithwale upopu, kunye nenqwelomoya yenqwelomoya eyaziwa ngokuba nguMalusi. I-Alitalia ithathe oopopu abane kumazwe ayi-171 kuwo onke amazwekazi.
Kodwa ngoo-2000 izinto bezitshintshile.
U-Alitalia ulahlekelwe yimali ukusukela ngo-2008. Ngo-2017 yonakala kwaye yabekwa ezandleni zabalawuli abakhethekileyo. Izithintelo zohambo lomoya ezihambelana ne-COVID-19 zongezwa kwiingxaki zika-Alitalia.
Inqwelo moya yayeka ukuthengisa amatikiti ngo-Agasti 25, 2021.
NgoSeptemba, iKhomishini yaseYurophu yanikezela imvume I-ITA (i-Italia Trasporto Aereo) Kwaye yagweba ukuba inkampani entsha ayizukubekwa tyala nge-900 yezigidi ($ 1 yezigidigidi) kuncedo olungekho semthethweni lukarhulumente olwamkelwa ngumanduleli wayo ngo-2017.
Ngelixa bekukho ezinye iingxelo zokuba igama lika-Alitalia lisenokungabikho okwangoku kwaye isivumelwano sisenokuvela, ifandesi yokuqala yokuthengisa uphawu alukhange ibize zibhidi kwaye i-ITA ithe ixabiso lokuqala laliphezulu kakhulu.